Ingcabha kuHulumeni nakubafundi ngezinkinga ezikhungweni - Bayede News
Izinyunyana zibabaza igalelo leSILO kwezemfundo
Kumapeketwane ezweni ngakwezemfundo ephakeme njengoba sekuphenduke isiko ukuthi njalo uma kuqala unyaka kuba nemibhikisho lapho abafundi besuke bekhala ngesikhwama esixhasa abafundi iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
Cishe manje wonke umuntu olandela imfundo ephakeme yaseNingizimu Afrika uzibuza umbuzo owodwa ukuthi ngabe umkhakha wemfundo ephakeme ubhekene nenhlekelele yini?
USolwazi uThokozani Majozi waseNyuvesi iWitswatersrand (Wits) ephawula ngenhlekelele lo mkhakha obhekene nayo uthe: “Ukuthi nje emva kwesikhathi esingaka sisabhekene nezingqinamba ezifana nalezi ngiyaphoqeleka ukuba ngivume ukuthi kunenkinga emfundweni.”
Ephawula ukuthi bekungeyikho yini ukuzikhohlisa ukuthi kuzoqalwa unyaka kuqhutshekelwe phambili kusanezinto ezimpandeni ezihambisana nezinto ezihlezi zibhikishisa abafundi okuwuhlelo lokuxhasa ngemali nokuthi ngabe uhlelo lukaHulumeni lucace ngokwanele yini ukuba kumele kwenzekeni ukuze singashaywa induku eyodwa kuphindelela uthe: “Ngiyavuma ukuthi kube khona ukungazilungiseleli ngokwanele ohlangothini lukaHulumeni kanye nezikhungo zemfundo ephakeme. Kube ukuzikhohlisa ukuthi sizoqhubeka lapho sibona abafundi benezinkinga ezingaka mayelana nezikweletu. Kodwa ngibuye ngisho ukuthi le ndaba yezikweletu zabafundi into enzima kakhulu ngoba ziningi izizathu ezidala ukuba sizithole sikuleso simo nabafundi ngokwabo banendima abayilimayo ukuba sibe nalezi zinkinga esibhekene nazo. Nezikhungo ngiyavuma kanye nezimo zomnotho.”
Uqhube wathi: “Abafundi banomsebenzi wokuthi uma sebenikiwe umfundaze kanye nokufunda ngesikhwama iNSFAS kumele bangene enyuvesi bafunde baqede ngesikhathi esibekiwe. Isikhathi esiningi akwenzeki lokho, kuhamba kutholakale ukuthi abanye babafundi uxhaso abebelunikiwe abalusebenzisanga ngendlela, abanye baze lubalahlekele bese bethatha izikweletu asebehluleka ukuzikhokhela, kunendima enkulu eklanywa abafundi bese kuba nezimo zomnotho esingeke sikwazi ukuzigwema.”
USolwazi uMajozi uphinde wananela kwelokuthi ngabe alikho yini iphutha endleleni okwabiwa ngayo lolu xhaso lwabafundi okwenza kugcine sekukhona abasala ngaphandle.
“Lokho kuliqiniso elingephikiswa. Kunabafundi abazali babo abahola imali engaphezu kwezi-R350 000 ngonyaka okuyibona abangakwazi ukuthi baxhaswe iNSFAS futhi ibona abenza ingxenye enkulu yale nkinga esibhekene nayo, kodwa nalapho angikholwa ukuthi sesingathi isikweletu sonke asicishwe. Njengoba kuyiyonanto elwelwa abafundi ngoba abakufunayo ukuthi isikweletu sonke sicishwe, kuqhutshekelwe phambili. Angikholwa ukuthi iyona ndlela esingaxazulula ngayo le nkinga, ukucisha isikweletu singayi ezimpandeni ngeke kusisize ngalutho ngoba eminyakeni embalwa ezayo sizobe sisasenkingeni efanayo.”
Uqhube wathi lolu daba akusiyona inkinga engaxazululwa uHulumeni uwodwa kepha ludinga ukubambisana kwabo bonke abathintekayo okungabazali kanye nezimboni ezizimele njengoba kuyizona eziqasha abafundi abasemanyuvesi.
“Nezimboni ezizimele kumele zisho ukuthi iyiphi indima ezingayilima. Nabazali laba abangakwazi ukuthi kube khona abangakufaka esikhwameni esithile benze njalo. Ukubheka ukuthi uHulumeni axazulule yonke lento ngeke kuze kusize,” kusho uSolwazi uMajozi.